VW ထုတ်လုပ်သူများအတွက်အဓိကအခွံ VW စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများအတွက် China Key shell
30pcs VW Tiguan ဂေါက်သီး Sagitar Polo MK6 Touareg ဝေးလံခေါင်သီ 2/3/4 ခလုတ်ခေါက်သိမ်းခေါက်အဖုံး (202AD)
အခြေအနေ: ၁၀၀% Brand New အရောင်: Black Button: 2/3/4/5 Button Key Blank: ဟုတ်ပါသည် Transponder Chip: အဘယ်သူမျှမအီလက်ထရောနစ် / ဘက်ထရီ: အလေး: 40g အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) 70.5 (L) x 36 (W) x 17 (T) အရွယ်အစား (လက်မ) ၂.၈ (L) x ၁.၄ (W) x ၀.၇ (T) အင်္ဂါရပ်များ - ၁. ကျိုးသောခလုတ်များသို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်ထားသောသော့ခလောက်များဖြင့်သော့တစ်ချပ်ကိုအကောင်းဆုံးအစားထိုးခြင်း။ ၂။ Key case နှင့် uncut key blade သာဖြစ်သည်။ 3. ဓားသွားကိုဒေသခံသော့ခတ်သူ / ကုန်သည်မှဖြတ်ယူပါသို့မဟုတ်သင်၏မူလနှင့်အတူဓါးကိုလဲလှယ်ပါ။ ပြည်တွင်းအီလက်ထရွန်ကိုယူပါ။
Volkswagen VW ပိုလို Passat B5 ဂေါက်သီး MK5 Beetle အတွက်သုံးထားသော Flip Remote Key Shell3ခလုတ်အစားထိုးကားသော့အဖုံး
အခြေအနေ: ၁၀၀% အသစ်အရောင်: အနက်ရောင်ခလုတ် - ၃ ခလုတ်သော့ဓါး - ဟုတ်ကဲ့ Transponder ချစ်ပ် - အီလက်ထရောနစ်၊ ဘက်ထရီ - NO - အလေးချိန် - ၅၀ ဂ။ ထူးခြားချက်များ - 1. သော့ခလုတ်များသို့မဟုတ်သော့ခတ်ထားသောသော့ခလောက်များနှင့်သော့ကိုအစားထိုးနိုင်သည်။ ၂။ Key case နှင့် uncut key blade သာဖြစ်သည်။ 3. ဒေသခံသော့ခတ်သူ / ကုန်သည်မှဖြတ်တောက်ခြင်းကိုရယူပါသို့မဟုတ်သင်၏မူလမူရင်းနှင့်ဓါးကိုလဲလှယ်ပါ။ အတွင်းပိုင်းအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို (immobilizer / transponder ချစ်ပ်ပါဝင်သည်) ကိုမူလအဝေးမှယူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အဓိက shell ထဲသို့ထည့်ပါ။ ထို့နောက်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
VW Volkswagen Golf Mk6 Tiguan Polo Passat Skoda Octavia Replacement 2/3/4 ခလုတ်များကားအဝေးထိန်းကားအဝေးထိန်း Shell Fob Case
အခြေအနေ: ၁၀၀% Brand New အရောင် - ဓာတ်ပုံပြပါ Button များ - 2/3/4 Button Key Blank: Yes Transponder ချစ်ပ် - အီလက်ထရောနစ် / ဘက်ထရီ - မတပ်ဆင်ရ - VW GOLF IV POLO TRANSPORTER အတွက်ဝယ်ယူခြင်းမပြုမီပုံများကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ။ သော့ချက် pic ပြပွဲများကဲ့သို့အတိအကျအတူတူပင်ပါ! အရေးကြီးသောသတိပေးချက် ၁။ ဤအချက်သည်ဝေးလံခေါင်ဖျားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ဝေးလံခေါင်ဖျားသော့ခွံအခွံအစားထိုးခြင်းသာဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းတွင်အတွင်းပိုင်း (အဝေးမှ / အီလက်ထရောနစ် / transponder ချစ်ပ်) ယူနစ်မရှိပါ။ သင်၏သော့သည်အသွင်အပြင်နှင့်တူသည်ကိုစစ်ဆေးပါ။
Smart Car Key Shell 2/3 ခလုတ်များ Volkswagen Vw Jetta ဂေါက်သီး Passat Beetle Skoda Seat Polo B5 အတွက်ကားခေါက်သော့ခတ်အဖုံး
Feature: 100% အသစ်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသည်။ သော့ကိုဓါးသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းမရှိပဲသင်၏ကားနှင့်လိုက်ဖက်သောဖြတ်တောက်ရန်သော့ခတ်သူသို့မဟုတ်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံယူဆောင်လာရန်လိုအပ်သည်။ သော့ခတ်ကိုဖြတ်တောက်ပါ၊ အတွင်းရှိအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို (immobilizer / transponder ချစ်ပ်ပါ ၀ င်သည်) ကိုမူလအဝေးမှယူပါ။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - အရောင် - အနက်ရောင် - ပစ္စည်း - ပလတ်စတစ်ခလုတ် - ၂/၃ ခလုတ်များ - Transponder ချစ်ပ် - အီလက်ထရွန်နစ်ဘက်ထရီ - မတပ်ဆင်ရ - ၂၀၀၀-၂၀၀၄ SEAT AROSA 2002-2009 SEAT CORDOBA 2002-2009 SEAT IBIZA 2002-2006 SEAT LEON 2002-2004 SEAT TOLEDO ၂၀၀၂-၂၀၀၉ SEAT ...